Ekpere nye Maịkel Onye isi ndị mmụọ ozi maka ịhụnanya.? Ndị Iro na Nchedo.
Ekpere Saint Michael Onye isi ala bu ịbanye ụwa jupụtara na agha ime mmụọ kemgbe Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi a, nke na-egosi n'akụkọ Akwụkwọ Nsọ, nọchiri anya ya dị ka onye agha si n'eluigwe zitere n'ụwa ịlụ ọgụ ime mmụọ anyị.
Anyị nwere ike ịrịọ maka enyemaka gị n’oge ọ bụla anyị chọrọ ya, ọ dị njikere mgbe niile inyere anyị aka ịlụ ọgụ ime mmụọ ndị a na-agaghị alụ ọgụ.
1 EKPERE EKPERE NIILE Michael Onye isi ndi Obu Onye bu Saint Michael Onye isi ala?
1.1 EKPERE Saint Saint Onye Isi Niile maka ihunanya
1.2 Ekpere nke Saint Michael Onye isi ndi mmụọ ozi megide ndị iro
1.3 Ekpere maka nchebe
1.4 Ekpere ka inweta oru
EKPERE EKPERE NIILE Michael Onye isi ndi Obu Onye bu Saint Michael Onye isi ala?
Iji kọwaa onye San Miguel bụ, anyị nwere ike ibido site n’ikwu na aha ya nwere nkọwa nke Onye dịka Chukwu.
Bụ otu nke ndị isi Archangels n'ihi na ekwuru aha ya na Akwụkwọ Nsọ na-esote Onyeisi Ndị mmụọ ozi Rafael na Gebriel. Ndi isi nke ndi agha nke elu igwe na ndi mo-ozi ndi ozo mebere iwu ya.
Site na mmalite nke okwukwe Ndị Kraịst, a na-ahụ St. Michael dị ka dike nke jisiri ike jiri mma agha nke ọkụ na-emeri onye iro ọjọọ Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya niile.
O bu onye nche na onye kwesiri ntukwasi obi nke ahụ ga-edobe ndụ anyị, ezinụlọ na ihe onwunwe anyị nke ọma.
EKPERE Saint Saint Onye Isi Niile maka ihunanya
Chineke zọputa gi, onye isi ndi mmụọ ozi St. Michael onye mmeri, onye gọziri agọzi na onye mmụọ ozi dị ebube nke Chineke kachasị amara na Ya, taa, n'oche m, a na m akpọku gị, ejiri okwukwe m kpọọ gị, m na-arịọkwa maka enyemaka na nchebe gị bara uru;
M na-arịọ gị ka ibibi ike ọjọọ niile nke nwere ike na-emetụta m, jiri ọkụ Chukwu gị kpuchie m site n'ike gị dị oke egwu ma dị ngwa ịrịọ m arịrịọ ka m mezuru ọchịchọ m.
Onye isi ndị mmụọ ozi Michael onye nche ọnụ ụzọ nke Eluigwe, ana m enye gị ekele m dị omimi maka ọrụ ị na-enye m mgbe niile na ihe mere m ji mara na ị ga-enyere m aka na nsogbu ịhụnanya m:
(kwuo ihe ị chọrọ imeta)
Oh, onyeisi ndị mmụọ ozi Michael, onye isi nke eluigwe, mmụọ ozi nke na-eche m nche! Eji m obi umeala na-arịọ gị ka ị gee ntị n'olu m ma tinye n'obi m udo dị mma m na-achọ.
Agaghị m ebi n’udo ma mkpụrụ obi m jupụtara n’enweghị ike.
Enwere m ike ịgwọ ọrịa m niile ma zere mwute m nwere na ịhụnaanya:
(aha onye ị hụrụ n'anya)
Oh, onyeisi ndị mmụọ ozi Michael, onye isi nke eluigwe, mmụọ ozi nke na-elekọta m, gee ntị n’olu m! N’aha nke Nna, n’aha nke Okpara, n’aha nke Mmuo Nso.
Connoisseur nke ezi ihu-n'anya na ihu-n'anya, juputara na ihu-n'anya nke Nna nke Eluigwe n’onwe ya na-ezipu na ọnụnọ nke ya.
Ọ dịghị onye dị mma karịa ya inyere anyị aka n'okwu ndị ahụ na-eweta ọtụtụ nchegbu na ndụ anyị.
Ma obu iji nweta ihunanya, idozi uzo, imezi nmekorita ma obu iduzi anyi ime ezi mkpebi ndi di nkpa.
Ka anyị dokwuo anya ụzọ ziri ezi anyị ga-agbaso ma nyere anyị aka oge niile.
Ekpere nke Saint Michael Onye isi ndi mmụọ ozi megide ndị iro
Ebube San Miguel ArcangelGị onye lụrụ ọgụ kachasị ilu megide ndị ozi ọjọọ na ịkpọasị;
gị onye pụtara mmeri site na nzuzu onye iro na ajọọ mmadụ;
gị onye pụtara mmeri site n’ọnyà ọjọọ nke onye isi ọchịchịrị, na-echebe mmadụ niile ka njigide ya, a na m arịọ gị ka ị chebe m n’aka ndị niile na-achọ ihe ọjọọ ma gbochie ngwa ọgụ nke ekwensu megide m.
Lezienụ anya maka ndị iro ahụ na-adịghị nkịtị, banyere ihe ọjọọ, ma nyere m aka ime ihe ziri ezi ka ọ bụrụ na, n'omume m, ọ dịghị onye mejọrọ ma ọ bụ iwe, na Kama nke ahụ, ibi n'udo n'etiti mmadụ na ịbịakwute Chineke na nsọpụrụ.
Mee ka m merie ndị iro na ndị ọjọọ niile.
Akụkọ ahụ kọrọ otú o si pụọ merie ndị iro ruo mgbe a chụpụrụ ha na mbara igwe.
La Bible O gosiputara ya dika dike di ike nke puru ibu onye kwesiri ntukwasi obi inyere anyi aka ịlụ agha nke ime mmụọ na nke anwaa oge niile.
Ndị iro bụ ihe na-echegbu anyị ebe ọ bụ na ọgụ ọtụtụ oge ma ọ bụ nsogbu na ndụ anyị oge niile.
Inwe mmekorita nke elu igwe nke na-abia n’agu anyi bu nnukwu nkpa n’ihi na ịlụ ọgụ n’ime mmụọ ka mma karịa iso ndị iro ndị ahụ na-akpasu anyị iwe.
Ekpere maka nchebe
Gi Onye Okike di ebube Michael Michael Onye isi ebube, Onye isi na onye ndu ndi agha nke elu igwe.
Onye nchekwa na onye na - agbachitere mkpụrụ obi, onye nlekọta nke ụka, onye mmeri, ụjọ na ụjọ nke mmụọ nwa na - enupụ isi.
Anyi ji obi ume ala arịọ gị, nwekwaa ịnapụta ndị ọjọọ niile anyị ji obi ike chigharịa;
ka amara gi chebe anyi, ka ike gi chebe anyi, na kwa, site na nchedo gi nke na - enweghị omuma, anyi nwere ike n’iru n’iru na ije ozi Onyenwe anyi;
ka omume ọma gị na-agba anyị mgba ụbọchị niile nke ndụ anyị, tụmadị na ọhụụ ọnwụ, nke mere na, site na ike gị nke dragon infernal ahụ na ọnyà ya niile, mgbe anyị hapụrụ ụwa a, anyị ga-ewetara gị, enweghị ikpe ọ bụla, n'ihu Chi dị nsọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ nchebe, nke a bụ ekpere Saint Michael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi.
Ohu kwesịrị ntụkwasị obi nke na-echekwa ụmụ Chineke nọ n'ụwa ebe nchekwa ya na nlekọta ya, onye, ​​dịka ezigara ya n'oge gara aga, inye anyị nlekọta oge, ga-eme anyị ọzọ.
Onye nche nke dị ike nke na-echekwa ezi na ụlọ na ihe onwunwe anyị nchekwa.
Bilie una oración Kwa ụbọchị na-eme ka anyị jiri okwukwe na mmadụ na-elekọta anyị n'ihe ọjọọ na ihe egwu ọ bụla na-emetụta ndụ anyị kwa ụbọchị.
Ekpere ka inweta oru
Akwa San Miguel Onye isi ndị mmụọ ozi, na ị na-anọdụ ala n'akụkụ Onye Kachasị Elu.
N’ụbọchị a, m bịara kpọọ isiala n’arịrị gị ka ị ghara ịhapụ ọrụ.
Ọtụtụ ndị na-abụghị m na-adabere na ya. Atụrụ m anya na m ga-atụkwasị obi na ngọzi gị maka taa, echi na oge niile iji mee ka ọrụ m baa ụba ma rụpụta ezigbo ihe. Amaara m nke ọma na ịtọhapụ mkpụrụ obi furu efu na pọgatrị.
M na-arịọ gị ka ime ka ọrụ m mịa mkpụrụ kwa ụbọchị dịka o siri dị ugbu a.
Achọrọ m inyere aka na ọrụ m ga-enweta, ebe ọ bụ na nke ahụ ga-eme m afọ ojuju onwe m mgbe m hụrụ na ndị ọrụ m nwere obi ụtọ ma ọrụ a.
Saint Michael Onye-isi-nchu-aja, kpere anyị ekpere ma gee ntị n’okwu ndị a.
Kpee ekpere na ekpere nke Saint Michael Onye isi ala iji nweta otutu okwukwe.
Ozi mmụọ ozi ya lekwasịrị anya n’enyemaka nke ndị na-enweghị ihu ọma, ọ bụ ya mere ekpere a na-ekpegara Michael Michael iji nweta ọrụ Ọ ghọrọ ngwa agha dị ike nke anyị nwere ike iji tupu anyị na-eme ajụjụ ọnụ a iji nyere anyị aka ma nye anyị amara n'ihu ndị ọzọ.
Christianka Katọlik Katọlik zuru ụwa ọnụ na-akpọ anyị oku ka anyị jiri okwukwe anyị fee onye mmụọ ozi a, kwenyere na ọ ga - enyere anyị aka inweta ọrụ kwesịrị anyị, chebe onwe anyị pụọ n'ihe ize ndụ ọ bụla, chebe anyị pụọ n'ihe ọjọọ niile ma lekọta anyị.
Anyị enweghị ike ibuli ekpere maka ihe ọ bụla kpatara ya ma ọ bụrụ na anyị emeghị ya site na iji obi anyị kwere na site n'eluigwe ka a ga-enye anyị ọrụ ebube anyị chọrọ.
Ee, onweghị azịza doro anya ma zie ezi karịa nke a.
Anyị ji ntụkwasị obi kwenyere n’ihe okwu Chineke na-agwa gị gbasara ekpere, ya mere anyị kwenyere na ọ bụrụ n’anyị bulie Striel Onye isi mmụọ ozi ọ ga-abịa n’igwe anyị dịka o mere n’oge gara aga.
Anyị kwesịrị inwe okwukwe mgbe anyị na-ekpe ekpere Jehova ike ekpere nye Michael Michael Onye-isi-agha.
Saint Mark, ekpere ike
Ike ekpere maka Saint Charbel